Iimpawu ze-Lithium Element - I-Lightest Metal
Oko Kufuneka Ukwazi NgeLithium, i-Lightest Metal
Nazi ezinye iinkcukacha malunga ne-lithium, eyona nxalenye ye-athomu yesi-3 kwitheyibhile yamaxesha. Unokufumana iinkcukacha ezingakumbi iinkcukacha ezivela kwitheyibhile yokungena kwexesha .
I-lithium yinto yesithathu kwitheyibhile yamaxesha, kunye neeponon 3 kunye nesimboli sezinto uLi. Inomlinganiselo we-atomic we-6.941. I-lithium yemvelo ngumxube we-isotop e zimbini (iLithium-6 kunye neLithium-7). Iingxelo ze-Lithium-7 zingaphezu kwama-92% obuninzi bemvelo yelungu.
I-lithium yintsimbi ye- alkali . Yisiliva-emhlophe ngombala ococekileyo kwaye ucoceke unokunqunyulwa ngommese webhotela. Inomnye wamaphuzu aphezu kwamanzi kunye nendawo ephezulu yokubilisa isinyithi.
Insimbi yeLithium iyamhlophe, nangona ibeka umbala obomvu kumlilo . Lo ngumpawu okhokelela ekufumaneni kwayo njengento. Ngama-1790, kwaziwa ukuba i-petalite yamaminerali (i-LiAISi 4 O 10 ) yatshisa i-crimson emlilweni. Ngo-1817, isazi samakhemikhali saseSweden uJohn August Arfvedson wayenqume ukuba i-mineral equlethe into engaziwayo ejongene nelangabi lebala. U-Arfvedson wabiza iqela, nangona wayengenakukuhlambulula njengetsimbi ecocekileyo. Kwaye kwafika ngo-1855 ukuba isazi samakhemikhali waseBrithani u-Augustus Matthiessen kunye nommakhemisi waseJamani uRobert Bunsen baqeda ukucoca i-lithium kwi-lithium chloride.
I-lithium ayifumaneki inkululeko kwimvelo, nangona ifunyenwe phantse zonke iindawo ezinokutsha kunye nemithombo yamaminerali. Kwakungomnye wezinto ezintathu eziveliswe yi-Big Bang, kunye ne-hydrogen kunye ne-helium. Nangona kunjalo, into ecocekileyo iyasebenza kakhulu ifunyanwe kuphela ngokwemvelo kunye nezinye izinto ukuze zenze iifom. Ubuninzi bemvelo yelungu kwi-Earth crust is about 0.0007%. Enye yezimfihlakalo ezijikeleze i-lithium kukuba inani le-lithium ekholelwa ukuba liye laveliswa yi-Big Bang liphindwe kathathu ngaphezu kwezinto ezenzululwazi zibona kwiinkwenkwezi ezindala. Kwi-System System, i-lithium yinto engaphantsi kakhulu kunezinto ezingama-32 zokuqala zamakhemikhali, mhlawumbi ngenxa yokuba i-nucleus ye-athomu yinto engaqinisekanga, kunye ne-isotop ezinzileyo ezinamandla amakhulu okubophelela ngokunyaniseka kwi-nucleon.
I-lithium meta l echanekileyo iyonakalisa kakhulu kwaye idinga ukuphathwa okukhethekileyo. Ngenxa yokuba iphendula ngomoya nangomanzi, isitoreji igcinwa phantsi kweoli okanye idibeneyo kwi-atmospheric emoyeni. Xa i-lithium ibamba umlilo, ukusabela nge-oksijini kwenza kube nzima ukucima amalangabi.
I-lithium yinto elula kakhulu isinyithi kunye nenxalenye encinci yomeleleyo, enobunzima malunga nesiqingatha samanzi. Ngamanye amagama, ukuba i-lithium ayifumananga ngamanzi (okwenzayo, ngokukhawuleza), yayiza kuhamba.
Phakathi kwezinye izinto ezisetyenziswayo, i-lithium isetyenziswe kwipilisi, njenge-ejenti yokudlulisa ukushisa, ukwenza i-alloys , kunye neebhetri. Nangona i-lithium compounds yaziwa ngokuzinzileyo, izazinzulu aziyazi kakuhle indlela echaphazela ngayo umonakalo kwinkqubo yenzwa. Yintoni eyaziwayo kukuba ukunciphisa umsebenzi we-receptor ye-neurotransmitter dopamine kwaye ingawela i-placenta ukuba ithintele umntwana ongakazalwa.
Ukutshintshwa kwe-lithium kuya kwi-tritium kwakuyindlela yokuqala yokusabela i-nyukliya eyenziwe ngumntu.
Igama le-lithium livela kwi-Greek lithos ezithetha ngamatye. I-lithium ivela kwiindawo ezininzi ezigwenxa, nangona kungabikho inkululeko kwimvelo.
Insimbi yeLithium yenziwe yi-electrolysis ye-lithium chloride.
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: I-Dimenticare
Unyaka weMonkey Horoscopes kuzo zonke izibonakaliso zaseShayina zoMoya
Funda Indlela Abafazi Bakhulu Abachaphazelekayo Ngayo Ukubulawa KwamaMama
IMfazwe yaseVietnam: I-North American F-100 Super Saber
Ngelo xesha i-US iValile (kwaye yahluleka) ukuqhuba i-Brothel
I-Sea Mouse Ocean Worm Profile
Imfazwe yaseBethel enkulu-iMfazwe yaseMelika